CEFERMAD : Manampy amin’ny fahazoana zaza. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE CEFERMAD : Manampy amin’ny fahazoana zaza.
CEFERMAD : Manampy amin’ny fahazoana zaza.
By Nirinajuil 08, 2017, 05:44 0
Betsaka amin’ireo mpivady no tsy mety mahazo zaza mihitsy. Anisany mahatonga izany ny fahatsetseman’ny “trompe” ny vehivavy ary ny tsy fahatanjahan’ny tsirinaina kosa ho an’ny lehilahy. Noho ny fivoaran’ny teknolojia, tsy mitombona ny hoe: tsy afaka ny hiteraka mihitsy ireo mpivady manana olana amin’ny tsy fananan-jaza. Ankehitriny, fomba maro no afaka atao mba hampitoe-jaza ny vehivavy iray.
Ho an’ny Centre de Fertilité de Madagascar (CEFERMAD), toeram-pitsaboana tokana manampy amin’ny fananan’anaka eto Madagasikara, ny fampiasana ny FIV/ICSI na ny fampitambarana ny tsirinaina ny lahy sy vavy, tsy misy firaisana ara-nofo no fomba voalohany ahazoana zanaka.
Nambaran’ny dokotera RAKOTOBE Andriamaro, tomponandraikitra ao amin’ny “Centre” fa azo atao tsara ny mahazo zaza kambana amin’ny alalan’io fomba io.
Raha te ahafantatra bebe kokoa momba azy ity, mandray anjara amin’ny ny hetsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana, eny amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely ny CEFERMAD.
Previous PostCLINIQUE FIDY: Mora handairan’aretina avy amin’ny firaisana ara-nofo ny lehilahy tsy mifora. Next PostFI.DM.TAM: Nilatsaka an-tsitrapo nanome ra